IM9- version malgache par THINKPAD OP8 - Fichier PDF
IM9 version malgache .pdf
Nom original: IM9- version malgache.pdfAuteur: THINKPAD OP8
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/04/2016 à 10:25, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 596 fois.
N° 009 / Desambra 2015 / www.atd-quartmonde.orgwww
Eny ho an’ny fampandrosoana, saingy ho an’ny rehetra!
Fanalalahana ny lalana, fanamboarana lalana vitsivitsy hanamora ny fifamoivoizana,
fanovana endrika ny kartie, ets. Lasa laharam-pahamehana ny fikatsahana izay
hanatsarana ny fiainana amin’izay lafiny izay eto Antananarivo. Samy manaiky ny
fanatontosana ireo tetikasa goavana ireo ny rehetra. Ny rehetra ve? Amin’ny lafiny
inona no ilazana fa tena tombon-tsoa ho an’ny rehetra ireo? Eto izao dia olona vitsy
kely sisa afaka manasa lamba eo amin’ny toerana fanasa-damban’ny
mponina,vokatry ny fanavaozana azy io. Lasa andoavam-bola be ny fampiasana
azy. Maro ankehitriny ny mantsaka rano amin’ny daba dia manasa any aminy, na
koa mandeha manasa lamba eny an-tanimbary, noho io antony voalaza io. Ankoatra
ny fanilikilihana, ny fampandrosoana toy io, dia miteraka voka-dratsy eo amin’ny
lafiny ara-pahasalamana. Etsy an-daniny, ny tetikasa fanamboaran-dalana dia
androahana mponina efa navenjivenjy tetsy sy teroa. Taona vitsivitsy lasa izay dia
nonina teto an-tampon-tanàna izy ireo, saingy noraofina andro alina tamin’ny
“camions” dia nafindra toerana. Nampanantenana fiainana tsaratsara kokoa any amin’ny toerana lazaina fa efa
voavoatra manokana ho azy izy ireo, nefa tanety ngazana tsy nisy hanin-kohanina no nametrahana azy. Mba
hahafahany mivelona, dia voatery niverina nanorim-ponenana teny amin’ny toerana manodidina
an’Antananarivo izy ireo. Noho ny herim-po ananany sy ny fikirizany, dia nahaorina trano biriky teo ry zareo ka
noraisin’ny Fokontany ho anisan’ny mponina ao aminy. Ahoana moa no hinoany, rehefa avy niaina karazampijaliana toy izany izy ireo, fa hifanaraka amin’izay andrasany ny famindran-toerana vaovao notapahina tsy
Tsy omby ny toeram-panasan-damba taloha
Vitsy sisa afaka manasa lamba
Tombon-tsoa ho an'ny rehetra ve?
Fiofanan'ny mpanentana ny ankizy
Nandray anjara tamin'ny fiofanana nokarakarain'ny Fikambanana Hay Kanto
sy ny EIF (Ezaka Ifampizaràna ho Fampandrosoana),ny 20-30 Aprily 2015
teny Androhibe I Hanitra, Totoa Voahangy, Lucie, Jocelyne, Eric. Nizara roa
ny fiofanana dia ny fomba fanentanana sy ny famoronana fitaovana aratsiansa amin'ny endrika fialam-boly ho fanabeazana. Nisy 26 ny mpandray
anjara. Samy niezaka ny rehetra hiara-hiofana sy hifanampy mba tsy hisy ny
voailikilika. Hoy ny mpanentan’ny ATD Quart Monde iray: “Tena Samy nahazo mari-pahaizana ny tsirairay
reharehanay tokoa ny firotsahanay an-tsitrapo, tsy misy tambiny na karama, miaraka amin'ny ankizy.
Talanjona ireo mpampiofana sy ireo tanora mpiofana teo nanontany anay hoe amin'izao fiainan-tsarotra
izao ve dia mbola mahafoy fotoana hanaovana asa fanasoavana ihany ianareo”?
“Tsy mba afaka mankeny amin'ny tranomboky izahay noho ny asa aman-draharaha, fa
izao izahay itondranareo boky dia mba manararaotra mamaky”.
Tany am-boalohany dia famakiam-boky an-kalamanjana no natao tany
amin’ny Kartien’Antohomadinika. Rehefa nanorina ny trano famakiam-boky
“Fanovozantsoa Joseph WRESINSKI” anefa ny Fikambanana dia najanona
tsikelikely izany. Nandritra ny fankalazana ny faha-10 taona dia nisy
tombanezaka natao niaraka tamin’ny mpitantana ny tranom-boky. Teo no
nahatsapana fa mihavitsy ny olona mandeha ao amin’ny tranomboky. Maro
be ny ray aman-dreny nangataka ny hiverenan'ny famakiam-boky ankalamanjana indray. Rehefa nandinika ny Fikambanana dia teraka teo ny
hevitra hanao famakiam-boky mifindrafindra. Isaky ny Alakamisy tolakandro,
nanomboka ny 21 Mey 2015, dia mandeha miaraka amin'ny boky sy tsihy
Faly aho fa niverina indray ny vaky boky
ireo mpitantana ny tranomboky roa, mitety ny vakim-paritra. Indray andro
raha nandalo i Marie Irène dia nijanona namaky boky teo ka hoy izy : “Faly aho fa niverina indray ny
famakiam-boky an-kalamanjana, mba ataovy isan-kerinandro ô !”
Mbola miana-mamindra nefa maha-be fanantenana ny "Université Populaire"
Ny Asabotsy 12 Septambra 2015 no natao teny Ambohibao ny
“Université Populaire” (UP) faharoa mitondra ny lohahevitra hoe :“Ny
fanabeazana mahomby”. Hoy ireo ray aman-dreny :“Sarotra ny
fiainana, ny fidiram-bola tsy misy. Lafo ny saram-pisoratana
anarana, ny vidin’ny fitaovana misondrotra isan'andro“. Eo koa
ny olana hafa : “Lasa fanarabim-bahoaka ny zanakay satria
mipetraka sady miasa akaikina toerana fanariam-pako izahay.
Lazaina hoe “zanak’Andramiarana mpatory an-tsena”, “4mi“n‘Andramiarana”. Vokatr‘izay dia lasa mihemotra na mivangabao
ilay zaza. Herisetra izany! “ Zavatra roa no tonga ao an-tsaina
raha miresaka momba ny fanabeazana any an-tsekoly: ny iray
fianarana, ary ny iray kosa fahalalam-pomba. Tsy hita izay
Ampiana ny zanaka tsy hirona amin’ny fidorohana
fahalalam-pomba ampianarina ny ankizy any an-tsekoly izany amin’izao, nefa tena ilaina tokoa izany
mba hampilamina ny fiainan’ny mpianakavy ao n-tokantrano. Amin’izay koa ny ankizy mahay miarahaba
olon-dehibe. Na dia eo aza izany olana maro iainan’izy ireo izany dia misy koa ny lafiny tsara, satria hoy izy
ireo hoe : “Rehefa mahay mamaky teny sy manoratra ny ankizy dia tsy voambaka.“
Tsiahin’ny 17 Oktôbra 2015
Tanànan’Antananarivo ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena
Anoherana ny Fahantrana lalina ny 16 sy 17 Oktôbra 2015.
Nanomboka tamin’ny 9 ora ka hatramin’ny 4 ora nandritra ny 2
andro ny varavaravana nisokatra niarahana tamina Fikambanana
mpiara-miombon’antoka miisa 9. Naverina tamin’izany tamin’ny
endrika loabary an-dasy ireo UP roa efa natao
fahasalamana ho an’ny rehetra" ny 16 Oktôbra maraina ary "Ny
fanabeazana mahomby" ny tolakandro. Hoy ity renimpianakaviana iray tamin’izany: “Nisy olona narary niditra
hopitaly tao amin’ny fianakaviako, saingy andoavam-bola
Loabary an-dasy tamin'ny 17 Oktobra 2015
avokoa ny zavatra rehetra eny amin’ny hôpitaly, eny fa na dia
ny alikaola, ny fitaovam-panindromana, ny farafara aza… Noho ny tsy fisiana, dia nanapa-kevitra ny
hitondra ny mararinay hody izahay. Rehefa tsy maintsy ho faty ihany manko, dia aleo maty any antranon’ny tena, toy izay maty ao anaty fahafaham-baraka eny amin’ny hôpitaly. Fantatro tsara fa tsy
afaka hanome fanafody ny marary izy ireo. Na izany aza anefa dia tsy azon’ireo mpitsabo ireo mihitsy
ny mahazo anay. Matetika aza izahay tsy voahaja akory”
“Ny fanabeazana no antoky ny fampandrosoana maharitra",
hoy kosa ireo fianakaviana sahirana vory teo. Ny 17 Oktôbra
maraina no nanatontosana ny fankalazana ny Andro Iraisampirenena Andavana ny Fahantrana lalina. Narahina loabary andasy notarihin’ny DCTP (Développement de Compétences
Techniques et Professionnelles) momba "ny fiofanana
arak’asa sy fahazoana asa izany ny tolakandro".
Fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena Andavana ny Fahantrana
20 Nôvambra : Andro Iraisam-pirenenaho an’ny Zon’ny Ankizy
Tsy navelan’ny PFSCE (Plateforme de la Société Civile pour
l'Enfance) handalo fotsiny io daty io fa nanao hetsika izy. Ireto avy
ny lohahevitra niaingana tamin’izany : “Ankizy miaina sy miasa
eny an-dalam-be”, “Ny asanay rahampitso sy ny vinan'ny ho
avy”, “Fampijaliana na fivarotana ankizy an-kolaka” sy
“Fanabeazana ho olom-pirenena vanona” ary“Tanjona
amin’ny Fampandrosoana Maharitra”. Nizara telo ny
fankalazana ka ny 11 Nôvambra no nanomanana loabary an-dasy
niarahan’ny ankizy 2 isaky ny mpikambana ao amin’ny PFSCE. I
Diamant sy Ezra no solontenantsika tato amin’ny ATD Quart Monde
tamin’izany. Ny 18 Nôvambra no nitateran’izy ireo ny vokatry ny
loabary an-dasy izay nanasana ireo sehatra maro samihafa, toy ny
Ny kôpia no ahafahana mamantatra ny momba ny tena Ministera sy ny sehatra miaro ny. Zon'ny ankizy. Ny 20 Nôvambra
kosa no nanaovana fampisehoana mivelatra tao amina tranoheva ka ankizy 20 avy any Andramiarana, 20 avy
any Antohomadinika notarihin'ireo mpanetan'ny BDR sy TAPORI no nanatrika an’io. Tao anatin'ny tranoheva
nisy ny Fanabeazana maha-olom-pirenena vanona no nisy ny fijoroana vavolombelon'i Princia: “...Tsapako ho
tena zava-dehibe ny fananana kopia nahaterahana: ilaina izany mba hahazoana mianatra sy hahafahana
mamantatra ny momba ny tena : ny anarana, daty nahaterahana ary indrindra ireo ray aman-dreny”.
Ny tanora sy ny fanadiovana
Volana vitsivitsy izao dia nanome tanana ny fianakaviana lasibatry ny
tondra-drano ao Antohomadinika ny tanoran’ny ATD Quart Monde.
Nanapa-kevitra izy ireo ny volana desambra 2015 fa hiasa mandritry ny 4
vakim-paritra alohan’ny oram-batravatrampahavaratra : fanadiovana ny lakan-drano madinika, sy ny rano
mihandrona ary fametrahana kitapo feno ranon-tany eny amin’ny lalan-kely
tratran’ny rano no natao. Izany dia iarahana amin’ny tompon’andraikitra
ifotony (ny filoham-pokontany, ny filohan’ny vakim-paritra 5, ny
fikambanana eo an-toerana ary ny mponina). Fantatr’izy ireo tsara fa tsy
ampy hamahana olana amin’ny fanadiovana ny kartie izay mitaky asa
goavana tokoa ary ilana ny fandraisana anjaran’ny rehetra, indrindra
indrindra ny Fanjakana izany. Ny atrik’asa sy ny hetsika atao miaraka
amin’ny fianakaviana dia manampy hahalalana bebe kokoa ny zava-misy
eo amin’ny kartie sy ny toe-javatra iainan’ny mponina ary ny ezaka ataony
isan’andro amin’ny fiaretana izany. Mitovy hevitra amin-dRamatoa Meltine,
mpikambana iray ao amin’ny ATD Quart Monde daholo ny ankamaroan’ny
mponina amin’ny filazana hoe : tokony hodiovina ny tatatra lehibe
anankiroa : C3 sy Andriantany. Raha atao bango tokana dia ny tatatra
rehetra (lehibe sy kely) sy ny fako ary ny trano fivoahana no fanalahidin’ny Antohomadinika madio no tanjonay mponina
fanatsarana ny tanànan’Antohomadinika. Nisy fivoriana nifanesisesy notarihin’ny ATD Quart Monde niaraka
tamin’ny tompon’andraikitra sy hery velona eo an-toerana, nitadiavana ny lalan-kizorana ho an’Antohomadinika
Véronique HUDINA: Tsy zoviana amintsika intsony i Véronique, na teny anivon’ny fanentanana
Véronique sy ny mpitantana ny tranomboky
famakiam-boky an-kalamanjana teny Andramiarana, na tao amin’ny
tranomboky Antohomadinika; eny fa na dia hatrany amin’ny
Fifampizarana fahaizana amam-pahalalana sy ny Andron’ny
fianakaviana teny Ambohimalaza ary nandritra ny fankalazana ny 17
Oktobra aza. Frantsay izy ary ny hanampy antsika maimaim-poana no
nahatongavany teto nandritra ny 3 volana. Tsy azontsika odian-tsy hita
ny andraikitra noraisiny tato amin’ny Fikambanana ka miombom-peo
amin’ireo mpitantana ny tranom-boky sy ireo mpanentana ny ankizy
izay niarahany bebe kokoa isika, misaotra sy mirary soa ho azy.
Fandehanan’i Denis GENDRE
Tamin’ny Febroary 2012 no tonga teto Madagasikara i Denis
GENDRE sy Nathalie vadiny. Nitantana ny MMM sy tao amin’ny Ekipa
Mpanentana Nasiônaly ary Solontena Nasiônaly i Denis nandritra ny
niasany teto amintsika. Nandao an’i Madagasikara izy mivady ny 27
Desambra 2015 ary mipetraka any Maurice aloha hatramin’ny Jiona
2016, fotoana hahataperan’ny andraikitra maha-Solontenan’ny
Faritra ao amin’ny Ranomasim-be Oseanina Indianina an’i Nathalie. I
Denis kosa, hanampy ny Fikambanana ao Maorisy amin’ny
fanombohana ny “Université Populaire”.
Ambohibao,,nanao veloma sy nirary soa ho azy amin’ny iraka vaovao
Atambatry ny ady itovizana isika na misaraka aza
ampanaovina azy ny mpikambana eto Antananarivo tamin’ny
Asabotsy 26 Desambra 2015 tolakandro. Ampiraisin’ny asa sy atambatry ny faharesen-dahatra amin’ny ady
itovizana hatrany isika ato amin’ny Fikambanana na eo aza ny elanelan-tany.
Ny maha-hafakely ny ATD Quart Monde dia “Samy sahirana nefa mifanatona sy mifanampy”
Nihaona tamin’ny Arsevekan’ny Faritra Atsimo Andrefana,
Monseigneur Fulgence RABEONY, ny Fikambanana ATD Quart
Monde any Toliara ny 7 Desambra 2015. Taona vitsivitsy izao ry
zareo any no nahazo birao maimaim-poana ao amin’ny Comité
de Développement Diocésain. Ho fisaorana sy fankasitrahana ny
Eveka ary ho fiombonan-kafaliana aminy noho ny nahatratrarany
ny faha-25 taona nanamasinana azy no anton’io fihaonana io. Ny
mahasarika ny Arseveka amin’ny Fikambanana dia ilay toetsain’ny samy sahirana mifanatona sy mifanampy, miady ho
an’ny Zony sy ny an’ny hafa ary manohitra ny fahantrana lalina.
Fitsidihana tany Toliara
Noelin’ny ankizy tany Mahajanga
Amin’ny maha-fetin’ny ankizy ny Krismasy dia nanapa-kevitra ny
mpikambana ao Mahajanga fa hankalaza izany miaraka amin’ireo zaza
sahirana ao amin’ny Fikambanana.Teo amin’ny tokotany malalaky ny
mpikambana iray no nanatanterahana izany ny 23 Desambra 2015.
Mba hahafahana mahazo ankizy maro dia naverina nasiana famakiamboky an-kalamanjana intelo alarobia mihitsy aloha talohan’io daty io. Ny
marainan’ny 23 Desambra no niara-nandravaka ilay toerana ny
mpikambana. Ny tolakandro tamin’ny 3 ora kosa no nanomboka ny
fampilalaovana ny ankizy. Nifarana tamina fizaràna mofomamy sy
vatomamy ary “biscuits”ny fiaraha-nifaly. Hita amin’izany fa tena liana
amin’ny famakiam-boky an-kalamanjana ny ankizy.
IM9- version malgache.pdf (PDF, 1 Ko)
mponina monde famakiam toerana tamin fanabeazana quart natao andro antohomadinika izany fikambanana ankizy desambra rehetra
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00419031.